म राजीनामा दिन्नँ : प्रधानमन्त्री - Limbuwan khabar
म राजीनामा दिन्नँ : प्रधानमन्त्री
बुधबार, १९ कार्तिक, २०७७ बिहानको ०८:५३ बजे, लिम्बुवान न्युज
काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश बर्बाद हुने भएकाेले आफूले प्रधानमन्त्रीबाट कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने बताएका छन् ।
बुधबार काठमाडाैंमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले याे कुरा बताएका हुन् । नेकपाभित्र विवाद र फुटकाे सम्भावना कायम रहेकाे बेला उनले बेलाबेला आफूले राजीनामा दिन लागेको भनेर हल्ला हुने गरेकाे समेत सुनाए ।
उनले भने, ‘के अहिले मैले राजीनामा दिन हुन्छ ? राजीनामा दिन मिल्छ ? मैले राजीनामा दिनु भनेको देशलाई बर्बादीतिर जान दिनु हो । त्यसकारण म राजीनामा दिने बाला छैन ।’